Homeसमाचारकोरोना संक्रमित पतिलाई, मुखबाट सास दिएर ब’चाउने पत्नीको प्रयास !
April 26, 2021 admin समाचार 2759
भारत अहिले विश्वमै कोरोना महा मा’रीबाट सबैभन्दा बढी पीडित भइरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य प्र’णाली नै यतिबेला डमाडोल हुने अव’स्थामा पुगेको छ। देशभर अक्सिजन सिलिन्डर नभएर हाहाकार मच्चिएको छ भने बिरा’मीले एम्बुलेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। मानिस ठेला गाडा र रिक्सामा अस्प’ताल जान बाध्य छन्। अस्पताल पुगे पनि बेड नपाउँदा संक्रमित म र्न बा’ध्य भइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँका भया’वह तस्बिर तथा भिडिओ भाइ’रल भइरहेका छन्। यसै क्रममा एउटा यस्तो हृदय’विदारक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, जहाँ एक महिला आफ्ना पतिलाई बचाउन मुखमा मुख जो’डेर श्वास दिइरहेकी छन्।
क्याम्प’सनमा उनले लेखेका छन्, ‘छुँदा पनि फैलिने रोगमा सासबाट सास दिने हिम्म’त गर्नु मुर्खता त हो तर प्रेम विवश र लाचार छ, आफ्नालाई बचाउने अन्तिम प्रयास हो, यस्तो अव’स्थामा आफ्नो ज्या’नको कुनै पर्वाह हुँदैन।
यो समाचार तयार पार्दा’सम्म त्यो तस्बिरलाई ७ हजारभन्दा बढीले लाइक गरि’सकेका छन् भने १९ सयभन्दा रिट्विट गरिएको छ। धेरै जना दुःखी भएका छन्। यी महिलाले आफ्ना बिरामी पतिलाई अटोमा लिएर आगराको एसएन मेडिकल कलेज पुर्या’एकी थिइन्। पतिलाई सास फेर्न कठिन भएपछि उनले आफ्नो मुखले नै सास दिने प्रयास गरेकी हुन्। तर लाख प्रयास गर्दा पनि पतिला’ई बचाउन सकिनन्।
पूरै देश कोरोना महामा’रीमा परेको छ । हरेक नागरिक कोरोनावाट जोगीने अनेक उपाय अ’पनाइरहेका छन् । व्यक्तिले सबै नियमहरू पालना गर्न थालेको छ, शारीरिक दूरी बनाउने देखि मास्क लगाएर कोरोनावाट बच्ने उपाय गरि’रहेका छन् । सबैलाई कोरोनाबाट टाढा रहन यति मात्र पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा, यो म’हत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफैं र आफ्नो श’रीरलाई यति धेरै तयार गरौं कि कोरोना भए पनि, यो हल्का हुन सक्छ र हामी यसलाई सजी’लै पार गर्न सक्छौं। यसको लागि, सबैभन्दा पहिले, हामीले हाम्रो फोक्सो’को स्वास्थ्यलाई बलियो राख्नु पर्छ।
यदि फोक्सो’ले राम्रोसँग कार्य गर्दछ भने शरीरमा अक्सिजनको स्तर पनि सजिलैसँग पुग्छ । यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोरोनाले फोक्सो’मा सिधा ह म ला गर्दछ, त्यसपछि सास फेर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हामीले पहिले नै फोक्सोलाई बलियो बनाउनु महत्त्व’पूर्ण छ। त्यसोभए फोक्सोलाई बलियो राख्नको लागि खानामा के चीजहरू समा’वेश गर्न सक्दछौं जानौं।
१। तुलसी : तुलसी पातमा अ’धिक मात्रामा पोटेशियम, फलाम, क्लोरोफिल म्याग्नेशियम, क्यारोटीन र भिटामिन सी हुन्छ जसले फोक्सो’लाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। बिहान ४, ५ तुलसीका पातहरू चपाउनुहोस् । यस बाहेक, तपाईं आयुर्वे’दिक काँडा बनाएर पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
२ निवारो : धेरै चमत्का’री तत्वहरू मध्य निवारो एक हो । यसमा भिटा’मिन ए, भिटामिन(सी, भिटामिन(के, पोटासियम, म्याग्नेशियम, कपर र आइरन जस्ता आवश्यक पोषकहरू हुन्छन्। यसको सेवनले फोक्सो बलियो हुन्छ र मुटु पनि स्वस्थ रह’न्छ। इताजा खबरबाट
May 5, 2021 admin समाचार 3192
June 5, 2021 admin समाचार 2604
March 19, 2021 admin समाचार 3453
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218858)